Madaxweynaha Somaliland Oo Hoggaamintiisa Siyaasadeed Ku Noqday Madaxweynihii U Horreeyay U Hoyda Laascaanood, Khudbad Loo Guuxayna Ka Jeediyay Shir Nabadeed Lagu Qabtay Adhi-Caddeeye | Hangool News
Madaxweynaha Somaliland Oo Hoggaamintiisa Siyaasadeed Ku Noqday Madaxweynihii U Horreeyay U Hoyda Laascaanood, Khudbad Loo Guuxayna Ka Jeediyay Shir Nabadeed Lagu Qabtay Adhi-Caddeeye
Hangoolnews.com:— Weftigii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), oo ku gudo-jiray maalintii labaad ee socdaalkiisa shaqo ee uu ku marayo gobollada bari ee dalka, ayaa xalay fiidkii si weyn loogu soo dhaweeyay Magaaladda Laascaanood ee gobolka Sool oo uu xalay u hoyday. Isagoo noqday madaxweynihii u horreeyay ee Somaliland ah ee u hoyda magaalo-madaxda gobolka Sool 25-kii sannadood ee ay Somaliland madax-banaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya.
Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisa waxa shalay si aan hore loogu arag iyo qalbi-samaan loogu soo dhaweeyay shacbiga deegaamada Guumays,Samakaab, degmadda cusub ee Adhi-caddeeye iyo Yagoori oo dhammaantood ka tirsan gobolka Sool.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa intii uu shalay marayay gobolka Sool uu dhagax-dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono deegaannadaasi oo ay ka mid ahaayeen waddo laami ah oo isku xidhi-doonta Degmada Adhi-cadeeye iyo Degmada Xudun, taasoo dhererkeedu noqon doono 85 km, iyo mid dayactir lagu sameynayo oo dhererkeedu dhan yahay 1.3 km.
Madaxweynaha Somaliland iyo weftigiisu waxay degmadda Adhi-caddeeye, kaga qeyb-galeen shirweyne qeyb ka ahayd gogoshii madaxweynuhu markii uu tallada dalka qabtay ugu baaqay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada barri gaar ahaan Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle.
Shirkan oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxa ka qeyb galay ergooyin ka soo kala kicitimay gobolladda Sool, Buuhoodle iyo Xaysimo, waxaana lagu faaqiday sidii shacbiga gobolladaas iyo xukuumadda Somaliland ay meel uga soo wada jeedsan lahaayeen masiirka ummadda walaalaha ah ee reer Somaliland u midoobi lahaayeen, si ay u meel mariyaan himiladooda iyo wada jirkooda dal ahaan iyo dad ahaanba.
Markii shirku furmay waxa hadalo halkaa ka jeediyey Wasiirro, Madaxda dhaqanka ee halkaa ku sugnaa tiradooduna ay aad u badnayd lana odhan karo umay kala hadhin maanta gogoshaa wada hadalka ee uu madaxweynaha qaranka Somaliland u fidiyey bulshada saddexdaa gobol ku dhaqan.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu shirkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo ruxday quluubta waxgaradkii iyo dadweynihii shirkaasi ka soo qeyb galay, waxaanu si qotodheer uga waramay dedaaladda xukuumadiisu ku hawlan tahay gaar ahaan dhinacyadda nabad-gelyadda, xalinta khilaafaadka, siyaasadda, diiwaan-gelinta, mashaariicda horumarinta iyo kor u qaadista adeegyadda ijtimaaciga ah.
Khudbadaas oo aad u dheerayd waxay u qornayd sidan:-“Garaadada, Cuqaasha, waxgaradka iyo haweenka sharafta leh ee madashan milgaha iyo maamuuska leh fadhiya dhammaantiin “Asalamu Calaykum Wa Raxmatullaahi Wa Barakaatu”.
Salaan ka dib, Mudanayaal iyo Marwooyin, sharaf weyn ayey ii tahay inaan ka soo qayb galo Golahan iyo gogoshan gobeed ee ay goob-jooga ka yihiin haldoorkii hoggaamiyayaashii dhaqanka ee bulshada Gobolka Sool.
Walaalayaal, waxaan jecelahay inaan si kooban isku dul taago qoddobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin:-
Midnimada iyo wada jirka Ummadda
Tabashada Bulshadda Gobolada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle
Waxaan xogogaal u ahay in hoggaamiyayaasha siyaasadda iyo dhaqanka ee deegaannada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle ay ka qabaan Qawad iyo Tabasho qaabka awood qaybsiga tallada Dalka.
Ø Waxaan aaminsanahay in la qeybsado hawsha, halabadda iyo hantida qarankan yagleesha ah.
Walaalayaal,Waxaan gar u arkaa in wixii khaldamay la saxo. Waxaan gar u arkaa in la dheeli-tiro awood-qaybsiga tallada Dalka. Waxaan ku qanacsanahay in loo baahan yahay in dib-u-eegis lagu sameeyo saami-qaybsiga kuraasta Baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland.
Walaalayaal, waxaanu diyaar u nahay in aanu idinka tirrno tabashada iyo turxaan kasta oo aad tirsanaysaan.Ma nihin dad kala tagi kara, mana nihin dad kala tashan kara, ee waxaynu nahay Dad isku dan ah oo isku Dal ah.Walaalayaal, waxaan leeyahay aan wada tashanno, oo aan isku tashanno, oo aan is aaminno. Hoggaaminta dalka waa loo siman yahay, kootana cid gaar ah uguma xidhna, xilkiisuna, magan ALLE, waa meerto, oo maalinba nin baa madax ka ah. Maanta anigaa Madaxwayne ka ah Somaliland, Shalayna waxaa Madaxwayne ka ahaa Daahir Rayaale oo ka soo jeeda Gobolka Awdal, berritana nin reer Sool ah ayaa Madax ka noqon kara.
Walaalayaal,Xaq baad u leedihiin in aad maalintiina Haaneedaan hoggaaminta dalka, mana jiro wax idinka hortaagan ee hareerta qabsada, kana qayb qaata diiwaan-gelinta iyo nidaamka doorashooyinka ee axsaabta badan.
Haddaba, si ummad ahaan aynu u kala bogsanno, isla markaana si mug iyo miisaan leh u falan-qayno arrimahaas iyo wax kasta oo khuseeya danaheenna guud, waxaan ugu baaqayaa mar labaad gogol wada hadal oo rasmi ah dhammaan Garaadada, Cuqaasha iyo siyaasiyiinta deegaannada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle. Waxaan idinku martiqaadaya 25/10/2016 magaalada Burco oo shirkaasi ka dhici doono.
Si uu u xoogaysto isfahanka, isdhexgalka, nabad ku wada noolaanshaha bulshadda, waxay Xukuumadaydu ka qeyb qaadatay shirar doceedyo aad u qiimo badan, kuwaas oo ay ka mid yihiin shirkii ka dhacay Magaalada Awr-boogays, oo aan jecelahay in aan halkan ku hambalyeeyo haldoorkii isugu yimid shir weynahaas.
Waxaan soo dhawaynayaa go’aanadii shirka Awr-boogays ka soo baxay.Waxaan soo dhawaynayaa dhammaan heshiisyadii iskaashiga iyo wax wada qabsiga ahaa ee ku dhex maray xukuumadda Somaliland iyo Beelaha Maxamuud Bari, Hinjiinle iyo Cabdiraxmaan Harti.Sidoo kale, waxaan hambalyeynayaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Caynabo.
Waxaan soo dhawaynayaa is-fahanka hor-dhaca ah iyo wada hadalka noo socda aniga iyo saxiibkay Cali Khaliif Galaydh. Labadayada iyo ragga kale ee nala ayniga ah maanta naloogama fadhiyo in aannu colaad beerro, ee waxaa nalooga fadhiyaa in aanu dadka u horseedno horumar iyo himilooyin gun dheer, Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “Cimri tegay ceeb laguma sagootiyo”. Ilaahayna waxaan ka baryayaa in uu dhammaanteen tubta toosan innagu hanuuniyo, tawfiiqdana inna waafajiyo.
Shirarkan goo-gooska ah ee kala danbeeya ugama jeedno in aanu ku qeybino ama ku kala qoqobno wax garadka bulshadda ku dhaqan dhulkan. hasa-yeeshee waxaanu uga goleenahay:-
In loo gogol xaadho shir wayne balaadhan oo ay ku wada xaajoodaan Somaliland iyo wax-garadka deegannada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle kaas oo ah, ka aan maanta, madasha ka muddeeyay.
Midnimada iyo wadajirka Ummada Somaliland waa mid ku fadhida muhiimad weyn oo marnaba aan madmadow la gelin karin, Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa “LABA ILAAH BAA U DAAWO QAADAY, LABANA IYAGAA DAAWO QAATAY”, waxaan leeyahay ummada Somaliland ILAAHAY ayaa u daawo qaaday oo waa kuwo wadaaga Dal, dad, daaq, degaan, diin iyo dhaqan soo jireen ah oo durugsan.
Haddaba, siyaasada xukumadda aan gadhwadeenka ka ahay, waxaa udub dhexaad u ah ururinta iyo midaynta shacbi weynaha Somaliland. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ahay oday ruug cadaa ah oo Ummad u arriminaayay in ka badan (40) sanno, uma aqaan siyaasadda hoggaamiyaha hagaagsan dulmi, dirsooc iyo dad la kala qaybiyo.
Sidaa daraadeed, waxaa iga go’an in aan ka tago dal iyo dad midaysan oo leh daareen kaliya, waxaan diyaar u ahay in aan galiyo Maal, Maskax iyo Muruq badan dhammaystirka dib u heshiisiinta dadkayga iyo dalkayga.
Walaalayaal,Waxaan idin leeyahay shan nin oo isku tallo ah hal shansho ayaa ka go’da, shan nin oo kala tallo ahna shan shansho ayaa ka go’da, waxaan diyaar u ahay inaan qaado tallaabo kasta oo suurto-gal noqon karta, taas oo lagu meel marinaayo midnimada qaranka iyo mataanaynta muwaadiniintiisa ku abtirsada.
Dawladda Somaliland waxay gudoonsatay inay Diiwaangaliso dhammaan dadka muwaadiniinta u dhashay Jamhuuriyada Somaliland, si ay u helaan jinsiyad iyo aqoonsi muujinaaya isir raacooda. EEBBE mahaddii, mashruucaasi wuu socdaa, waxaana la meel mariyay 60%, inta hadhayna waxaa la qabyo-tiri doonaa sannadka 2017. Dhinaca kale, waxay xukuumadda Jamhuuriyada Somaliland iyo Dalalka Deeq-bixiyayaasha aynu saaxiibka nahay iska kaashanayaan hirgelinta Diiwaan-gelinta Codbixiyayaasha, taas oo ay ujeeddadeedu tahay in si sax ah oo hufnaan sugan leh loo diiwaan galiyo dadka leh xaq codbixineed ama awood sharci u leh inay ka qayb qaataan Doorashooyinka Qorshaysan 2017.
Qaran ahaan waxaynu si fiican ugu guulaysannay xaqiijinta mashruucan oo sidii loogu tallo galay uga hirgalay Gobollada Togdheer, Awdal, Saaxil, Maroodi-jeex iyo Sanaag.
Gobolkan Sool ee aynu maanta Joognana, idam Eebbe waxay ka bilaabi doontaa Maalinta Salaasada ee 23/08/2016. Anigoo fursadan iyo fagaarahan ka faa’iidaysanaya, waxaan jecelahay inaan farta ugu fiiqo bulshada ku nool Gobollada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle inay Diiwaangalintu tahay muhiim, isla markaana saamayn weyn ku leedahay Tiirarka Aasaaska u ah nolosha gaar ahaan siyaasadda, nabadda iyo horumarka.
Sidaa daraadeed, waxaan ugu baaqayaa dhammmaan Dadwaynaha ku dhaqan Gobollada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle inay isu diiwaangaliyaan si xikmad, xasilooni iyo xamaasad leh. Sidoo kale, waxaan ugu baaqayaa Garaadada, Cuqaasha, Culima-awadiinka, Wax-garadka, Haldoorka iyo haweenka Deegaannadan inay door weyn ka qaataan tisqaadka iyo taabba-gelinta Diiwaangelinta Cod-bixiyayaasha.
Waxaanu dhisnay Jaamacadda Nuugaal oo ay ka qalin jabiyeen aqoonyahanno badan oo dalka iyo dadka wax ku soo kordhiyay.Waxaanu qodnay ceelal biyood tiro badan
Si gaara markan isu-dul-taago magaala madaxda Gobolka Sool ee Laascaanood, waxaan Xukuumad ahaan ka samaynay kawaanka hilibka, sariibadda khudradda iyo waddooyin dhan 7 kilometer, iyo 6 kilometer oo hadda gacanta lagu hayo. Waxaanu samaynay garoon kubbadeed oo hadda roog casriya la dhigayo. Waxa hadda gacanta lagu hayaa dhismaha hooy dugsi cusub iyo dib u dhiska schoolkii hore ee dumay. Iyada oo lagu qalabayn doono agab waxbarasho oo casirya iyo macalimiin tayo leh.
Mudanayaal iyo Marwooyin, waxaan idiin caddaynayaa in ay Xukuumaddayda ka go’an tahay in xoog la saaro horumarka Gobollada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle, si loogu sameeyo is beddel weyn nolasha bulshada deegaanadaa. Waxaa noo qorshaysan in horumarka deegaannada loo sameeyo qorshe fog iyo mid dhaw, kuwaas oo sannadka dabayaaqadiisa ka muuqan doona buugga Qorshaha dheer ee Qarankan.
Guntii iyo gabogabadii, waxaan leeyahay amba faydniye waxba ha i farin.Ilaahay waxaan ka baryayaa in boggeenna iyo beerkeenna burcad isu mariyo.Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu midnimadeenna iyo wada jirkeenna adkeeyo. Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu balaayo oo dhan ina hareer mariyo, baladkeenana aamin ka dhigo”.
Markii kulankaasi u soo afmeermay waxa weftigii madaxweynaha loo gelbiyey magaalo madaxda Gobolka Sool ee Laascaanood, oo ay weftiga Madaxweynuhu hoggaaminaayey xalay u hoydeen kuna sugnaan doonaan, taasoo taariikhda gobolka ku suntanaan doonta, marka loo eego intii uu jiray gobolka Sool oo aanu weligeed Madaxweyne u hoyan, isagoo madaxweynuhu taariikhdaas mid la mid ah ka dhigay gobolka markii uu madaxweyne Axmed Siilaanyo safaro kala duwan ku yimid magaalada kana fuliyey mashaariico dhawr.
Madaxweynaha Somaliland waxa weftigiisan xubno ka ah Wasiirrada Arrimaha gudaha, maaliyadda, warfaafinta,madaxtooyadda, khayraadka biyaha, Xanaanadda Xoolaha, Qorshaynta, dib u dejinta, Wasiirul dawleyaal, wasiir ku-xigeenno iyo xidlhibaanno ka soo jeeda gobolladda Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle. Sidoo kale waxa weftigan ka mid ah Guddoomiyaha ahna Murrashaxa madaxweynaha ee xisbiga tallada haya ee KULMIYE Muuse Biixi Cabdi.